Inqwelomoya entsha phakathi kweToronto Island kunye neOttawa kwiAir Canada ngoku
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Inqwelomoya entsha phakathi kweToronto Island kunye neOttawa kwiAir Canada ngoku
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Le ndlela intsha yenzelwe ukuhlangabezana neemfuno zabathengi kule marike ihanjwe kakhulu, inecandelo elikhulu lokuhamba kweshishini, kwaye incedisa inkonzo yomoya kwisikhululo senqwelomoya saseMontreal-Toronto Island kutshanje.
Indlela entsha yeAir Canada yokuncedisa kwinkonzo esele ikhona eMontreal ukusuka kwisikhululo senqwelomoya saseBilly Bishop.
Indlela iya kuqala ngeehambo ezine zokubuya yonke imihla, inyuke ukuya kuthi ga kubuyelo lwesibhozo ukubuya yonke imihla ukuqala ngehlobo lowama-2022.
I-Air Canada ngoku isebenza ngeenqwelo-moya ezijikelezayo ezihamba mihla le phakathi kweToronto Island neMontreal.
I-Air Canada namhlanje ibhengeze ukuba izokwazisa ngenkonzo entsha phakathi kweBilly Bishop iToronto yeSixeko sase-Ottawa kunye ne-Ottawa ukuqala nge-31 ka-Okthobha ka-2021. Indlela izakuqala ngeehambo ezine zokubuya yonke imihla, inyuke ukuya kuthi ga kubuyelo lwesibhozo ukubuya yonke imihla ukuqala ngehlobo lowe-2022.
"I-Air CanadaInkonzo entsha esuka kwisiqithi saseToronto ukuya eOttawa izakuqhagamshela ikomkhulu laseCanada ngokuthe ngqo kunye neziko lelizwe eliphambili kweziko loshishino. Le ndlela intsha yenzelwe ukuhlangabezana neemfuno zabathengi kule marike ihanjwe kakhulu, inecandelo elikhulu lokuhamba kweshishini, kwaye incedise inkonzo yethu yesikhululo senqwelomoya saseMontreal-Toronto. Ngomnye umzekelo wendlela i-Air Canada eyakha ngayo inethiwekhi yayo, kubandakanya nokongeza iindlela kunye neendawo ekuzimiseleni kwethu ukuphuma kwindyikitya yokufa eyomelele ngakumbi, utshilo uMark Galardo, uSekela Mongameli oMkhulu, uCwangciso lweNethiwekhi kunye noLawulo lweNgeniso eMoyeni. Khanada.
I-Air Canada ngoku isebenza iinqwelomoya ezintlanu ezibuyayo mihla le phakathi kweSiqithi saseToronto neMontreal. Ishedyuli yenkonzo entsha yaseToronto Island-Ottawa eqala ngo-Okthobha 31, 2021 yile:
ukubhabha Ukuhamba Ukufika Iintsuku zokusebenza
AC 8950 Isiqithi saseToronto ngo-07: 00 I-Ottawa ngo-07: 59 mihla le
AC 8954 Isiqithi saseToronto ngo-08: 35 I-Ottawa ngo-09: 34 mihla le
AC 8960 Isiqithi saseToronto ngo-17: 00 I-Ottawa ngo-17: 59 mihla le
AC 8962 Isiqithi saseToronto ngo-18: 00 I-Ottawa ngo-18: 59 mihla le
AC 8953 I-Ottawa ngo-07: 00 Isiqithi saseToronto ngo-08: 04 mihla le
AC 8955 I-Ottawa ngo-08: 30 Isiqithi saseToronto ngo-09: 34 mihla le
AC 8961 I-Ottawa ngo-16: 25 Isiqithi saseToronto ngo-17: 29 mihla le
AC 8963 I-Ottawa ngo-18: 30 Isiqithi saseToronto ngo-19: 34 mihla le
Le nkonzo iya kuqhutywa yi-Air Canada Express Jazz nge UDe Havilland Dash 8-400 equkethe ukutya okulula kunye nokusela. Ishedyuli yezorhwebo yase-Canada inokuhlengahlengiswa njengoko kufuneka ngokusekwe kwi-COVID-19 trajectory kunye nezithintelo zikarhulumente.
I-Air Canada ikwabonelela abathengi bayo ngenkonzo yokuhambisa ibhasi yeshutile phakathi kwedolophu kunye neSikhululo senqwelomoya saseToronto. I-shuttle izisa abahambi ukuya nokubuya kumda osentshona weThe Fairmont Royal York Hotel, ebekwe kwikona yezitrato zangaphambili naseYork, ngqo ngqo ukusuka kwiSitishi soManyano.